Thwebula VirtualBox 5.1.14 – Vessoft
VirtualBox – isofthiwe obusebenzayo ngokudala imishini virtual nge okusebenza izinhlelo ezahlukene. Isofthiwe inesimiso evumela ukuthi wena asindise isimo kohlelo virtual futhi uma ngesidingo sibuyele esimweni sangaphambilini. VirtualBox kwenza enweba amathuba lokwamukelekakokwato ngokusebenzisa ezenezelwe, kuhlanganise hardware 3D-ukushesha kanye nokwabelana ifayela emkhatsini okusebenza systems. Isofthiwe has ithuluzi esikhulu esebenzisa onjiniyela, abahloli kanye nabasebenzisi jikelele for izinhlelo ezahlukene emsebenzini test noma uhlelo ngaphandle umonakalo ohlelweni main.
Usekela okusebenza systems ezahlukene
Ithuba lokululama uhlelo lokusebenza
Amazwana on VirtualBox:
VirtualBox Ahlobene software:
Internet Isofthiwe ukwakha router virtual kukhompyutha yakho. Isofthiwe ubonisa ulwazi mayelana nokusetshenziswa traffic ye yokungena ku-internet.
Abashayeli Ithuluzi for loading fast and ephumelelayo abashayeli. Isofthiwe ulwazi ngemininingwane mayelana idivayisi bese ubonisa abashayeli edingekayo.